Home Wararka Farmaajo oo ka Adkaaday Midowga Musharaxiinta! xildhibaanada beelahoodana maamulanaya
Farmaajo oo ka Adkaaday Midowga Musharaxiinta! xildhibaanada beelahoodana maamulanaya
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo oo adeegsanaya Fahad Yasin, Rooble iyo qaar kamida madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxaa uu si ku-talagal ah u bilaabay in uu sida uu doono ka yeelo xubnaha xildhibaanada ee laga soo doorto deegaanada ay ka soo jeedaan kooxda isku sheegtay Midowga Musharaxiinta.
Farmaajo oo doonaayo in doorashada Aqalka Hoose ay daahdo ayaa waxa uu bilaabay in uu sameeyo talaabooyinkii uu ku sameeyayay doorashada Aqalka Sare taas oo ah in mudo dhowr bilood ah uu afar afar ama shan sahan xildhibaan u u saaro bishiiba.
Ma aha kaliya in doorashada uu daahinayo laakiin waxa uu si toosa u maamulayaa xildhibaanada laga soo magacaabo degaanada ay ka soo jeedaan musharaxiinta xubnaha ka ah ururka Midowga Musharaxiinta. Gaar ahaan deeganada Galmudug, HirShabelle iyo Koonfur Galbeed.
Waxaa wax lala yaabo ah iyaga oo Midwga Mushaxiinta ay maalinkastaa ku shirayaan magaalada Muqdisho, eedeyna jeedanaya Farmaajo, ayuu Famraajo waxa uu ku guulaystay in sand ku darsadao waqtigiisa ka dibna uu isaga sida uu doono u maamusho doorashada Dalka.
“Adeer dad nool ayaan ka hadlaynaa ee ma waxaa la isweydiiyaa kuwa sheegta Midowga Musharxaiinta, aaga oo ah reer Muqdisho niyadda ayaa ayaa nagaya digleen iyagiina karaamada ayaa ay iska qadeen.. Hadii aan ninkaan (Farmaajo) loo helin qof cusub oo ka baxsan midowga musharaxiinta dalkaan Fahad iyo Farmaajo ayaa sida ay doonaan ka yeelayo” . Sidaa waxaa yiri Maxamed Sayid oo ah nin ganacsade ah oo maqaayad ku leh degmada Xamar weyne